भक्तपुरमा पहिलो पटक देखियो ‘स्क्रब टाइफस’ ६ बर्से बालकमा !
यो रोगबारे सरकारले निःशुल्क उपचार दिएको छ, बेलैमा सचेत नहुँदा ज्यानै जान सक्छ
| 2016-09-01 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । पछिल्लो पटक पूर्वी नेपालबाट संक्रमित भएको मानिने स्क्रब टाइफसका रोगी भक्तपुरमा समेत भेटिएको छ । जिल्ला अस्पताल भक्तपुरमा उपचारका लागि आएका ६ वर्षीय एक बालकमा स्क्रब टाइफस भेटिएको अस्पतालका छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डा शम्भुदत्त जोशीले बताए ।
जोशीका अनुसार मुसा वा छुचुन्द्रोमा हुने एक प्रकारको किरा ‘माइट’ले टोक्दा संक्रमित हुने यो रोग दोस्रो विश्व युद्धपछि देखापरे हो । यो रोग मुसा मारेर आएको बिरालो समातेमा पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने जोशीको भनाइ छ ।
रोगको लक्षण के हो ? बच्ने कसरी ?
सुरुमा शरीरमा डाबर आउने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरिरमा गाँठा देखिने, टोकेको ठाउँमा खरानी रङ्गको डाबर आउने, पछि कलेजो, श्वासप्रश्वास, आन्द्रा, रगतको नली फुटेर ज्यानै जानसक्ने जस्तो खतरनाक यो रोगबारे बेलैमा सजग हुनु पर्ने डा जोशीको भनाइ छ ।
भक्तपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नवराज गेलालका अनुसार भक्तपुरमा यो रोग पहिलो पटक देखापरेको हो । यो रोगबारे मानिसहरुमा चेतनाको अभाव रहेको भन्दै सरकारले यो रोगको निःशुल्क उपचार र औषधिको व्यवस्था गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।
नेपालमा कस्तो छ यो रोग संक्रमणको सरकारी डाटा ?
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा यो रोगबाट अहिलेसम्म करिब ४०० जना सङ्क्रमित भएको पाइएको छ भने ५ जनाको ज्यान गइसकेको छ । पूर्वी नेपालका संखुवासभा र आसपासका जिल्लाबाट यो रोगको संक्रमण देखिएको थियो ।
१६ भदौ, ०७३